Intsholongwane ye-corona evela e-China ibonelela nge-alibi efanelekileyo kwisibophelelo sokugonya kwihlabathi: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	21 Januwari 2020	• 11 Comments
Sele kuyiminyaka ndibhala ukuba kufuneka kubekho iflegi enkulu yobuxoki yokuqinisekisa ukuba kugonyiwe kunyanzeliswa amazwe kwinqanaba le-UN. Yimithetho kuphela Ingxaki, Ukuphendula, Isixazululo, iyasebenza. Intsholongwane enjalo ayifanelanga ukuba ibekhona, unokuyiguqula ibe ngumdlalo wemidiya, njengakwiimuvi. Inqaku leli kukuba wonke umntu uyakholelwa kuye nokuba ezopolitiko zinobuso obunzulu zithatha inxaxheba kwinkqubo yomboniso. Imithombo yeendaba kunye nabezopolitiko bayinxalenye yomdlalo obambe isininzi kumdlalo odibeneyo weTruman.
Kwincwadi yam ndicacisa ngokweenkcukacha ukuba kutheni kufanele kubekho ukuzibophelela kugonyo kwihlabathi liphela nokuba iflegi enkulu yobuxoki iya kumiselwa oku. Ngokuqhambuka kwesityholo coronavirus (ekwabizwa ngokuba 'yi-Wuhan virus') e-China sinayo iflegi yobuxoki enjalo. Kufanele ukuba ibe yintsholongwane elungileyo yosulelo enokudluliselwa komnye umntu iye komnye umntu. Kukhethwa ngokuphefumla kwaye ngenxa yoko akunxibelelani, ukuze kube yingozi kakhulu kwaye unqamle umda. Kuya kufuneka ufike emhlabeni nje amaTshayina kwisikhululo seenqwelomoya kwaye sonke isikhululo seenqwelomoya asulelekile. Umhle! Sidinga ingxaki enkulu kangako. Kutheni? Ukunika intamo yengxoxo malunga nengozi yokugonywa.
Ulawulo Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo, isekwe ekudaleni ingxaki yempembelelo enkulu kuluntu. Impendulo iphakanyisiwe kwimithombo yeendaba nakwezopolitiko kwaye ngokuyintloko ijongelwe ukuthusa abantu, ukuze yamkele isisombululo osoloko unaso eshalofini: Umthetho wokugonya wehlabathi.
Oko kuthetha ukuba oorhulumente kunye namajelo eendaba kwinqanaba lehlabathi kufuneka bathathe inxaxheba kulo mdlalo. Nangona kunjalo, ungayila intsholongwane kwilebhu kwaye uyisasaze elizweni. Nangona kunjalo, kubalulekile ukubona ukuba amazwe alwa ngokudibeneyo kwicandelo elibonakalayo njengoko iintshaba zisebenza kwisikripthi esifanayo senkosi ngasemva kwezigcawu.
Ngaba uyafuna ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba kutheni kufuneka kunyanzelwe umthetho wokugonywa? Emva koko yiyalela incwadi yam ukuze ubone umfanekiso omkhulu. Kuyo ndiyacacisa ukuba ngoobani ababhali besikripthi (abasebenza kunye kwilizwe ngokubanzi) kwaye kutheni lo mbhalo ubalaseleyo ukhona. Kwinqaku '5G kunye nokudluliselwa kwabantu' ndinyusa isipikili esincinci. Funda eli nqaku lingezantsi uze u-odole incwadi (ukuba ifundwe ngo-1 emva kwemini) ukuze ubone umfanekiso omkhulu. Ngale ndlela ke uyawuxhasa umsebenzi wam, ukuze ndikwazi ukuqhubeka.
UPDATE: funda apha Olona lwando lubalulekileyo lubonisa ukuba eli nqaku libhekiswa kule patents.
Uludwe lwekhonkco lovimba: msn.com
Usulelo lwentsholongwane kaZika nangoko ngokuqhagamshelana ngesondo
tags: coronavirus, isifo, amanga, eziziimbalasane, iflegi, inkinga, asabela, izibonda, isisombululo, umgomo wokugonywa, mfuneko, intsholongwane, Wuhan, A
21 Januwari 2020 kwi-17: 19
Inokunika abafana ithuba lokuba
ukuzama umva kubemi baseTshayina.
Ungalibali imodeli yengeniso yamakhwenkwe, inani lamaxesha amaTshayina amaxabiso entengo. Bala inzuzo yakho.
Kananjalo akufuneki basebenze nohlahlo-lwabiwo mali lwabamnyama ukuze baqhubeke nokuhlawula izinto abazithandayo.
21 Januwari 2020 kwi-17: 39
indikhumbuza ngeskripthi sefilimu esiphikisayo
23 Januwari 2020 kwi-09: 40
24 Januwari 2020 kwi-17: 38
Ndayibukela ifilimu kwakhona, kuba yayilixesha ukususela oko ndandiqala ukuyibona ifilimu. Kwaye ndicinga ukuba ulungile malunga nemeko yokwenyani:
21 Januwari 2020 kwi-19: 29
Umsebenzi onzima wenziwe kwiilebhu ezahlukeneyo
Isifo esilandelayo Esibulalayo sinokuba sesiphina izoyikiso esizaziyo, utsho iingcali
Asilazi igama laso. Asazi ukuba iza kuqala ngaphi, nokuba iza kuphela nini. Kodwa siyayazi ukuba phantse iza kuthi.
21 Januwari 2020 kwi-21: 08
imiyalezo yokuqala sele ingene phakathi, kuthekani ngexesha lokufakwa?
Intsholongwane eguqukayo, umahluko we-SARS
23 Januwari 2020 kwi-00: 46
Le ikwayindlela yokulwa (i-Biowarfare), i-China yaqeshwa kwakungekho kudala njengotshaba olusemthethweni lomanyano lwe-NATO.
Oku kuyandikhumbuza uloyiko lwe-Anthrax emva nje kwe-9/11, kamva le ntsholongwane yavela ukuba yenziwe kwiilebhu yasemkhosini yaseMelika.
jannes van de wal wabhala wathi:
24 Januwari 2020 kwi-19: 52
Martin, xa kuziwa kugonyo olunyanzelekileyo, ucinga ukuba yeyona nto ilungileyo inokwenziwa ngabantu abayaziyo le ajenda iphantsi kwayo?
25 Januwari 2020 kwi-13: 11
Isimo esivela kwi-movie Contagion, emva kwemizuzu engama-28 kunye nemizuzwana engama-47 incwadana ibonakala ngamazwi athi "Bio-terrorism" abhalwe kuwo. Ngokombono wam, ifilimu isebenza njengeyona nto ibonakalayo kwinto eyenzekayo ngoku ..
27 Januwari 2020 kwi-00: 59
ISeattle yayisesinye sezixeko zokuqala zamazwe apho kwafunyanwa khona iCorona.
SEATTLE (AP) -Umhlali wase-US osandula ukubuya kuhambo lwamazwe aphesheya ufunyaniswe enayo le ntsholongwane sele ibangele ukuqubuka eTshayina kunye nokubeka iliso elibukhali kwihlabathi liphela, amagosa ezempilo ase-US uthe ngoLwesibili.
Le ndoda ibuyele kwindawo yaseSeattle embindini weveki ephelileyo emva kokuhambela eWuhan kumbindi China, apho kwaqhambuka umhlaba. Umhlali wase-Snohomish County ukwiminyaka yakhe engama-30 kwaye wayekwimeko entle ngoLwesibini esibhedlela e-Everett, ngaphandle kweSeattle. Akathathelwa ingqalelo njengoyisongelo kubasebenzi bezonyango okanye eluntwini, amagosa ezempilo utshilo.
I-US lilizwe lesihlanu ukunika ingxelo ngokubona ukugula, kulandela iChina, iThailand, iJapan, kunye noMzantsi Korea.
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2002/08/Institute-for-OneWorld-Health-Receives-Grant , njengeZiko elinye loRhwebo lweHlabathi
27 Januwari 2020 kwi-01: 38
« ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey
Ulutsha lwanamhlanje lufuna ukuzalisa iinkampu zokufunda kwakhona (i-gulags) ngabahambi bemozulu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 88.689